Pierre-Emerick Aubameyang Oo Sheegay Hal Arin Oo Ka Niyad Jabisay Nolosha Arsenal – Kooxda.com
Home 2018 March Ingiriiska, Wararka Maanta Pierre-Emerick Aubameyang Oo Sheegay Hal Arin Oo Ka Niyad Jabisay Nolosha Arsenal
Pierre-Emerick Aubameyang Oo Sheegay Hal Arin Oo Ka Niyad Jabisay Nolosha Arsenal
March 13, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Weeraryahanka kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa shaaca ka qaaday in ay hal arin niyad jab ku tahay tan iyo markii uu kooxda ku soo biiray suuqii kala iibsiga bishii January.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa aaminsan niyad jab ugu bilaabantahay noloshii Arsenal iyada oo ay sabab u tahay in aanu Gunners kala qayb qaadan karin Tartanka Europe league.
Weeraryahanka reer Gabon ayaan Arsenal u ciyaari karin Europe league iyada oo ay sabab u tahay in uu kooxda Borussia Dortmund soo matalay tartanka champions league kuwaas oo haatan ka ciyaaraya tartanka.
Aubameyang oo 28 jir ah ayaa goolkiisii ugu horeeyay dhaliyay kulankii ugu horeeyay ee uu Arsenal u ciyaaro kulankii ay guusha 5/1 ah ka gaartay Everton.
Laakiin waxa uuna goolal dhalin 3 kulan oo ay ka mid yihiin guuldarooyinkii ka soo gaaray Arsenal laba kulan kulan oo Man city ah yo kulankii Tottenham.
Waxa uu gool dhaliyay kulankii Ay Arsenal guuldarada 2/1 ah kala kulantay Brihton bilowgii bisha ka hor inta uuna gool kale dhalin kulankii Axadii ay Guuners guusha 3/0 ah ka gaartay Watford.
Aubameyang ayaa aaminsan in uu qaab ciyaareedkiisa ugu fiican wali heli laayahay maadama uu todobaadkii hal kulan ciyaaro.
“Aad ayaan u niyad jabsanahay sababtoo ah sharciyadu way yar yihiin … Anigu garan maayo sida aan ugu hadlo afka Ingiriiska laakiin waan ka niyad jabay sababtoo ah ma caawin karo kooxdayda,” ayuu yiri.
“Markii aan joogay Dortmund waxa aan ciyaari jiray hal maalin saddex maalin kasta laakiin haatan waxa aan ciyaara hla maalin todobaadkii ama waxa labada kulan u dhexeeya wakhti dheer, mana ahan wax fiican, taasna waa nolosha aan doonayo in aan la macaamilo”.
“Wakhti badan ma ciyaarin bishii January sidaa darteed waxa igu adag in aan helo qaab ciyaareedkayga fiican laakiin haatan waxa aan dareemayaa wax fiican, waxa aan u shaqeeyaa si adag”.